कामकै लागि सर्वसधारणले सम्मान र साथ दिनुभएको छ। त्यो हाम्रो बलियो आधार हो : कुलमान घिसिङ «
कामकै लागि सर्वसधारणले सम्मान र साथ दिनुभएको छ। त्यो हाम्रो बलियो आधार हो : कुलमान घिसिङ
प्रकाशित मिति : १० जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १३:१९
-कुलमान घिसिङ, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल बिद्युत प्राधिकरण
रिसाउनेभन्दा पनि कार्यान्वयनको तहमा जाँदा त्यो ‘एग्रेसिभनेस’ देखाउनु पर्ने बाध्यात्मक स्थिति हुँदो रहेछ। रसुवामा पनि परिस्थिति बुझ्दा दुई जना मान्छेले दुई सय जना मजदुरलाई काम गर्न रोकेका थिए। कुनै खास कारण नै थिएन। आम मानिसहरूको मुद्दा पनि थिएन। मात्र व्यक्तिगत स्वार्थमा त्यस्ता कुरा भएको थियो। कुनै पनि ठाउँमा काम भएन भने दोष विद्युत प्राधिकरण र कुलमान घिसिङलाई आउँछ। त्यसैले मैले हस्तक्षेप गर्न खोजेको हो। त्यहाँको माहौल बनाउन खोजेको हो। प्रोजेक्ट टिमलाई ढाडस दिन खोजेको हो। आयोजनामा काम गर्नेहरूलाई माथिबाट सहयोग गर्न सकिएन भने कहाँ काम हुन्छ? स्थानीय भन्दैमा एक जनाले प्रोजेक्ट नै बन्द गरिदिने? यो स्थिति हुन हुँदैन भनेर मैले हस्तक्षेप गरेको हो। रसुवामा म जसरी प्रस्तुत भएँ रिसाएजस्तो देखियो। कहिलेकाहिँ अलिकति ‘एग्रेसिभ’ हुनुपर्छ। प्रोजेक्टहरू कार्यान्वयनमा जाँदा यस्तो हुन्छ। जहाँसम्म लेखा समितिको कुरा छ, कसैलाई व्यक्तिगत तहमा आरोप लगाउनु राम्रो होइन। लेखा समिति सम्मानित संस्था हो। तर त्यहाँ व्यक्तिगत लाञ्छना लागाउने कुरा भयो, एक जना सांसदबाट। मेरो आवेश त्यसको प्रतिउत्तर हो। तर मैले उहाँलाई अनादर गर्ने गरी केही बोलेको छैन। जुन हिसाबले उहाँ प्रस्तुत हुनुभयो त्यसको जवाफ दिएको मात्र हो।
खोलामा पनि काम गर्न नदिने। खोला पनि डाइभर्ट भएर आएको हो। मेरो जग्गा हो भन्ने अनि काम गर्न नदिने। जंगलमा त झन् दिँदै नदिने। मान्छेको जग्गामा पनि नदिने। अनि कहाँ बनाउने त? नाङ्गो डाँडामा जहाँ रूख नै छैन। त्यहाँ पनि सहमति नलिई हुँदैन भनेर वनले भन्ने। नगरपालिकाले हाम्रो क्षेत्र हुँदैन भन्ने। अनि प्रसारण लाइन कहाँबाट जाने? उडेर जाने त भनेको हो। त्यो वास्तविकता हो। प्रसारण लाइन भनेको बिजुली विकासको महत्वपूर्ण अंश हो। प्रसारण लाइन भएन भने उत्पादित बिजुली ग्राहककहाँ पुर्‍याउन सकिन्न। बिजुली खेर जान्छ। त्यसैले प्रसारण लाइन हाम्रो लाइफ लाइन हो।
हामी तीन विषयमा केन्द्रीत छौं- विश्वासनीयता, गुणस्तर र सुरक्षा। अविच्छिन्न बिजुली, समान भोल्टेज र दुर्घटनाको रोकथाम हाम्रो मुख्य ध्यान हो।यो विषयलाई हेरेर प्रणाली सुधार गर्नु पर्नेछ। हामी व्यापक विद्युतीकरणमा गएका छौं। साढे दुई वर्षको अवधिमा ६५ बाट ७८ प्रतिशतसम्म ग्रिड कनेक्सन पुर्‍याएका छौं। यति धेरै विस्तार भएको पहिलो पटक हो। नेपालमा लोडसेडिङमात्र अन्त्य भएको होइन। विद्युत विस्तार पनि भएको छ। करिब १२ प्रतिशतले विस्तार भएको छ। वर्षको १ लाख मिटर बाँडिरहेको प्राधिकरणले गएको साढे दुई वर्षमा मात्र ११ लाख मिटर बाँडेको छ। आगामी चार वर्षभित्र शतप्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य छ। दुर्गम क्षेत्रलाई जोड्ने र सहरी क्षेत्रमा मागेजति बिजुली दिने पूर्वाधार सँगै बनाउँदै छौं। वितरण प्रणाली सुधारका लागि, ठाउँठाउँमा सवस्टेशन निर्माण गरिरहेका छौं। अहिले नेपालभर सय वटा सवस्टेशन निर्माण भइरहेका छन्। काठमाडौंमा दिनमा हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली खपत हुने भयो भने त्यसको वितरण प्रणली हामीसँग छैन। हामी काम गरिरहेका छौं। उद्योगलाई पनि मागेजति बिजुली दिनु पर्नेछ। आउने वर्षमात्र हामी चार हजार मेगावाट बिजुली वितरणका लागि सवस्टेशन थप गर्दै छौं। बिजुली उत्पादनमात्र नभई खपतका लागि पनि पूर्वाधार बनाउँदै छौं।बिजुली खपत बढाउन हामीले बिजुलीमा आधारित सामग्रीको प्रयोग बढाउनलाई प्रवर्द्धन गर्ने हो। त्यसका लागि पूर्वाधार बनाउने कार्यविधि हामी बनाउँदै छौं। जस्तै विद्युतीय गाडी चलाउनका लागि चाहिने चार्जिङ स्टेशन बनाउने केही ठाउँमा र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने। बिजुलीको शुल्कमा हेरफेर गर्नेजस्ता काम हामी गर्दै छौं।
हामी अहिले एघार सयभन्दा बढी मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिरहेका छौं। अब अर्को वर्ष ९ सयदेखि एक हजार मेगावाट थप्ने हाम्रो लक्ष्य छ। अर्थात् हामीसँग करिब दुई हजार मेगावाटको प्रणाली हुन्छ। हाम्रो सिस्टममा १७ सयदेखि २ हजार मेगावाटमात्र चल्यो भने पनि सुख्खा सिजनमा हामीले राति र दिउँसो निर्यात गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसका लागि पूर्वाधार तयार छ। ढल्केबर मुजफ्पुर प्रसारण लाइन चार सय केभीमा चार्ज गर्ने गरी सवस्टेशन डिसेम्बरसम्म तयार हुन्छ। नेपालमा पहिलो पटक चार सय केभीको सिस्टम बन्छ। लाइन अहिले नै चार सय केभीको छ। अरू पनि ६ वटा १३२ केभीको प्रसारण लाइन लिंक हामीसँग छ।
मुख्य कुरा भारतीय बजारलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने हो। अल्पकालीन, दीर्घकालीन र दैनिक ट्रेडिङ हेर्नु पर्ने हुन्छ। हामीले धेरै गृहकार्य गरिरहेका छौं। इनर्जी बैंकमा करिब सहमति भइसकेको छ। अर्को वर्षको असार-साउनसम्ममा हामीले भारतसँग विद्युत व्यापार सुरू गर्ने हो। चाँडै नै हामी भारतीय बजार ‘पावर एक्सचेन्ज मार्केट’ जहाँ दैनिक व्यापार हुनसक्छ त्यस्ता मार्केटमा छिर्ने गरी अगाडि बढेका छौं। भारतको ट्रेडिङ रेगुलेसनले सबैलाई खुला बनाएको छ। नेपाल बंगलादेश र भारतको लगातारको प्रयासबाट अहिले मार्केट खुला हुने चरणमा छन्। मार्केटसँगै हाम्रो पूर्वाधार पनि बनेको छ। बुटवल-गोरखपुर ट्रान्समिसन लाइन हामी बनाउन सुरू गर्दैछौं। यो सबै कुराले नेपालमा धेरै भएको भारत जाने र सुख्खा सिजनमा नेपाललाई नपुगे भारतबाट आउँछ। स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने हो। हाम्रो पानी खेर जानु भनेको पैसा खेर जानु हो। हिउँदमा लोडसेडिङ गर्नुपर्‍यो भने राम्रो भएन। उद्योग र उत्पादनमा असर पर्छ। हाम्रो विद्युत खेर जाने बेला भारततिर पठाउने र सुख्खा याममा त्यही बिजुली यता ल्याउने नै ‘इनर्जी बैंकिङ’ हो। यसले दुबै देशलाई फाइदा गर्दैछ।विद्युत व्यापार अहिले पनि भैराखेको छ। बिहारमा अहिले पनि राति कहिलेकाहिँ हामीले विद्युत पठाइरहेका छौं। बढी भएको बेला अहिले पनि कहिलेकाहिँ राति ३० देखि ४० मेगावाट विद्युत बिहारमा जान्छ। यहाँ पानी फाल्नुभन्दा पठाउनुपर्‍यो। केही दिनअघि पानी परेको बेला हामीलाई केही बढी भयो। उता पठायौं। त्यस्तो स्थितिमा व्यापार प्रणाली चलेको छ। बढी भएको बिजुली हामीले वास्तवमा हामीले आफैं खपत गर्नुपर्ने हो।बिजुली बेचेर हामीलाई फाइदा छैन। किनभने निर्यात गर्दा प्रतियुनिट ५ देखि ६ रूपैयाँ आउला। तर यहाँ खपत गर्दा त्यही बिजुलीले सय रूपैयाँको उत्पादन हुन्छ। अर्थतन्त्रलाई माथि ल्याउँछ। खपत बढाउन विद्युतीय सवार देखि ग्यास रिप्लेसमेन्टदेखि उद्योगहरूमा खपत बढाउनु पर्छ। रातिको मुल्य समायोजनको काम हामी गर्दैछौं।भारतबाट विद्युत आयात यथावत् छ। यसले व्यापार घाटा बढाइरहेको छ। निर्यातको सपना जनतालाई देखाइरहँदा कतिपय आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने समय लम्बिरहेका छन्। उदाहरणका लागि माथिल्लो तामाकोशी अझै पुरा भएको छैन?
प्राधिकरणले प्रसारण लाइन विस्तारमा समस्या भोगिरहेको छ। तपाईंले धेरै कारण पनि दिनुभयो। तर सँगसँगै सडक विस्तारमा ढिलाइ तपाईंहरूको कारणले भएको छ। विद्युतको पोल नहटाउँदा विकास निर्माण प्रभावित भएका छन् नि!अहिले नेपालभर धेरै सडक एकसाथ विस्तार भइरहेको छ। देशभरै यही काम छ। ती सडकमा हाम्रा बिजुलीका पोल छन्। एक फिट सडक विस्तार भए पनि सार्नै पर्छ। ती सबै पोल सार्दा हामीलाई अर्बौं रूपैयाँ लाग्छ। सार्नुभन्दा नयाँ पोल राख्नु नै सस्तो पर्छ। हामीलाई पोल सार्न बजेटको सीमितता छ।सडक विभागलाई हामीले सडक विस्तारको योजनामै पोल सार्ने काम राख्न सुझाएका छौं। हामीले प्राविधिक सहयोग गर्ने थियौं भनेका छौं। तर त्यस्तो भइरहेको छैन। काठमाडौंमात्र पोल सार्न आठ अर्बजति लाग्ने रहेछ। बजेट धेरै लाग्ने देखिन्छ। यसका बाबजूद हामी काम गरिरहेका छौं।